Taariikhda Xidiga kubada cagta ee Eden hazard –
Home TAARIIKHDA Taariikhda Xidiga kubada cagta ee Eden hazard
Taariikhda Xidiga kubada cagta ee Eden hazard
xariif.net- halkan waxan kusoo gudbin doonaa Taariikhda Xidiga kubada cagta ee Eden hazard qaybtii koowaad ee taariikhdiisa kubada cagta
Eden Hazard waa ciyaaryahan xirfadeysan oo reer Belgian ah oo haatan u u ciyaara kooxda Chelsea F.C. waxanu dhashey 7 Jannaayo 1991, magaalo ku taala La Louvière, Belgium.
waxaana uu u ciyaaraa xulka qaranka Belgium. Waxa uu ku ciyaaraa booska khadka dhexe, waxaana loo yaqaanaa qaab ciyaareedkiisa weerarka. Waxa uu kasbaday ixtiraamka uu ka soo horjeeda isaga oo inta badan ku tilmaamaya inuu yahay “ciyaaryahan baas fiican” iyo “oo difaacu ka cabsado”.
Taariikhda Cristiano Ronaldohttps://xariif.net/taariikhda-xidiga-kubada-cagta-ee-cristiano-ronaldo/
Waxaa dhaley Qoys kubada ciyaara kubadda cagta, wuxuu bilaabay inuu kubada cagta ku ciyaaro da ‘yar, isagoo ku soo boodaya xaafada Royal Stade Brainois oo ku taala meel ka baxsan garoonkooda iyagoo aan cidna u sheegin guriga. Waalidiintiisa ayaa tan ka bartay kaddib markii uu tababaruhu yimid gurigiisa si loogu mahadceliyo tayada wiilka yar.
Wuxuu si dhakhso ah u bilaabay inuu si joogto ah u tababaro si uu u noqdo ciyaaryahan xirfadle ah. Inkastoo uu kulankiisii ​​ugu horeysay ee tartan rasmi ah ee da’diisu ahayd 10 sano oo ka soo horjeedey kooxda gabdhaha ayaa 5-0 kaga badiyey-0, kadib markaa waxa uu u ciyaaray kooxda koowaad ee Lille 16ka sano jir marka uu ahaa.
Ugu danbeyntii wuxuu boos ka helay kooxda Chelsea waxaana uu ku soo tartamaey Ballon d’Or xidigyada ku guuleystay Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo oo leh xeelad gaar ah oo kubada cagta ah.
Carruurnimadiisii iyo Noloshiisii Hore
Eden Hazard wuxuu dhashay Jannaayo 7, 1991, magaalo la yidhaahdo La Louvière, waxaana loo soo qaaday Braine-le-Comte. Aabihiis, Thierry, wuxuu ahaa ciyaaryahankii khadka difaaca, oo u ciyaaray La Louvière ee heerka labaad ee Belgium.
halka hooyadiis, Carine, waxay aheyd weeraryahan ka tirsan Waaxda Koowaad ee Dumarka ee Belgian.
Hooyadii way ka tagtay kubada cagta markii ay saddex bilood uur yeelatay Eden. Waxay markii dambe dhashay saddex wiil oo kale, oo la kala yidhaadoThorgan, Kylian iyo Ethan, kuwaas oo dhamaantood noqday ciyaaryahano kubadda cagta ah.
Qoyska Eden hazard oo dhameystiran waa kuwan sawir laga qaadey isagoo yar oo ciyaala ilaa ilmahooga ugu yar, Qoyska hazard oo dhameys tiran waa kan
laso Qaybta 2aad Taariikhda Hazard